I-Recipe Isonka sesonka esivela kwi-whey
Isonka kwiSerum Fluffy kunye nesonka esenziwe ngekhaya esiphunga, yintoni enokumnandi ngakumbi? Iingxowa zezonka ezenziwe kwintlama ye whey zifunyenwe ngombala ococekileyo. Kulula ukusebenza kunye novavanyo, into ephambili nje kukuvumela ukuba ikhuphuke kabini. Imfihlelo yezonka eziluhlaza akuyikugqithisa inhlama ngepini. Usebenza kuphela ngezandla zakho. Umtya wesonka uthanda ukufudumala kwezandla kunye namandla abo. Ngoko ke, akufanele uqale ukubhaka amaqebelengwane, ukuba unesimo esibi.
Whey 400 ml
Umgubo wengqolowa 5 tbsp.
Imvubelo eyomileyo 2 tsp.
Ioli yeoliyi 20 ml
Inyathelo 1 Ukwenza isonka, uya kufuna i-whey entsha, umgubo wengqolowa, imvubelo eyomileyo. Kwaye nje ioli yeoli yomnqophiso encinci yokucoca inhlama phambi kokubhaka.
Inyathelo 2 Yongeza imbiliso kwi-serum kwindawo yokushisa. Shiya imizuzu eyi-15, uze udibanise.
Inyathelo 3 Ufake umgubo kwintlama. Gxotha umgubo kancane. Unokuhamba kwaye ungaphantsi kwexabiso elichaziweyo. I-Gluten ngomgubo ihlala ihluke. Xa ufumana inhlama eqinile, yakha i-bun, yimboze ngehawula uze ushiye ukunyuka ngeyure eli-1.
Inyathelo 4 Inhlama, ephindwe ngamaxesha angama-2, kufuneka ifuthe kakuhle. Wenyuka ke wenyuka kwakhona waguqa kwakhona.
Inyathelo 5 Xa uhlama inhlama kabini, ungaqala ukusebenza nayo.
Inyathelo 6 Ukwahlula inhlama ibe yizingxenye ezine. Kulo nxalenye nganye, zinike izandla zakho ngesimo sekhekhe ephahleni. Kuya kubakho ukungalingani, kodwa xa inhlama iphakama, le mpazamo iyalala.
Inyathelo 7 Gcoba i-tray yokubhaka ngeoli, ungayifaka iphepha lephepha. Beka iigwele kuso. Ikhekhe nganye kufuneka ifakwe ngeoli yeoli, phezulu nje. Yishiye inhlama, ingafihla, imizuzu engama-30 yokuphakamisa. Ngeli xesha, yonke ioli iya kufakwa kwihlama kwaye ngenxa yoko isinkwa siya kuba mnandi kwaye sinqabile.
Isinyathelo 8 Bhaka i-buns ide iphekwe, kwiqondo lokushisa lika-180 ° C malunga nemizuzu engama-20. Susa ii-pancake ezilungiselelwe uze uzibeke ukuze uzipholise. Ukukhonza isonka kwitafile kucolile bhetele, isinkwa esishisayo asicebisi.
Inkukhu e-mustard marinade
I-Seabuckthorn kumachiza omntu
KVN yonke into? UAlexandro Maslyakov obandakanyeka ekukhohlisweni kobuqhetseba
I-pie nenkukhu kunye noshizi
Iikhokiti ze-cookies kunye ne-hazelnuts
Izindlela zokunyanga izilonda zesisu
Indlela yokulahla inwele ebusweni
Ukwabelana ngesondo okokuqala-iingcebiso zeengcali
I-Brie ushizi ebhakakwe inhlama
Yintoni elele ephupheni lethu?
Ukucinga okulungileyo kukutshintsha ubomi
Amaqanda aqhekezayo ngamakhowe ekudleni kwasekuseni
Izandi zenziwe ngesandla: iingcamango ezintathu ezilula zeefesistas ezikhanyayo
Andikwazi ukufumana ulwimi olufanayo kunye nabahlobo bam bahlobo bam.
Unokukunceda njani umntu anqobe amanqanaba obomi obunzima?